Global Voices teny Malagasy » Polonina: Miresaka Momba Ny Tolo-dalàna Hampidirana Indray Ny Fanamelohana Ho Faty Ireo Mpiondana Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Desambra 2011 6:49 GMT 1	 · Mpanoratra Anna Gotowska Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Polonina, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Tamin'ny faran'ny Novambra 2011, Jaroslaw Kaczyński , mpitarika ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Polonina Lalàna sy Fitsarana , dia nanambara fa mankasitraka ny fampidirana indray ny fanamelohana ho faty ho an'ireo “heloka bevava mahatsiravina.” Ny fanavaozana ny fehezan-dalàna famaizana dia haseho ny parlemanta amin'ny faran'ity taona ity, hoy izy.
Amin'izao fotoana i Kaczyński dia miatrika fivakisana henjana ao anivon'ny antokony ao  [pl], ary na dia ny filazàna faran'izay bitika momba izany fomba fijery ny sazy faratampony izany aza dia mety horaisina ho làlana iray enti-mandrombaka mpifidy, kanefa dia niala any koa adihevitra iray goavambe mikasika ilay lohahevitra.
Amin'ny maha-ao anatin'ny Fiombonambe Eraopeana azy, sahala amin'ny tsy mampino ny hoe i Polonina hanova ilay lalàna tamin'ny 1997 mandràra ny fanamelohana ho faty , nefa – raha ny fahatsapàna azy – ampahany be amin'ny fiarahamonina Polone no miombon-kevitra amin'Ing. Kaczyński. Taorian'ny fanambaràny, maro tamin'ireo Polone mpanao politika avy amin'ny elatra havanana no nanambara  [pl] fa manohana amin'ny anaran'ny tenany ny fanamelohana ho faty, na dia nanaiky ny lalàna Polone aza ry zareo, izay nametraka izany ho tsy ara-dalàna.
Fanadihadiana iray momba io lohahevitra io, nataon'ny CBOS  (Center for Public Opinion Reaserch) tamin'ny volana May, no nilaza fa 61 isan-jaton'ny vahoaka Polone no nihevitra fa “tokony hampiasaina ny fanamelohana ho faty ho an'ireo tranganà heloka bevava henjana be,” ary 34 isan-jato tamin'ireo namaly no nilaza fa manohitra azy io. Ny fanadihadiana farany indrindra, nataon'ilay tranonkalan'ilay gazety mpiseho isanandro isan'ny be mpamaky indrindra, gazeta.pl  [pl], taorian'ny nanombohan'ny adihevitra, no maneho koa fa ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa hevitra tsara ny famerenana indray ny fanamelohana ho faty.
Araka ny fanadihadiana farany natao taty anaty aterineto, 51 isanjaton'ireo namaly no mankasitraka ny famerenana indray ny fanamelohana ho faty ho an'ireo heloka bevava henjana be.
Satria niitatra be ny adihevitry ny olona, ny tontolon'ny bilaogy koa tsy nijanona ela tamin'ny fikombonam-bava. Ilay bilaogera remigiuszmielczarek  [pl], izay milaza ho “manohitra an'i Kaczyński amin'ny resaka hafa rehetra,” dia manoratra hoe :
Azoko antoka 100% fa tena mendrika sy voamarina ny fanamelohana ho faty mba hanasaziana ny tranga famonoana olona efa voamarina, famonoana efa nomanina. Izay no fomba fahitako ny atao hoe rariny – rehefa mifandanja ny sazy sy ny haavon'ny heloka vita. Rehefa notapahan'i [Hammurabi ] ny tànan'ny mpangalatra iray dia tsy rariny ny nataony, satria henjana loatra ny sazy nomeny. Saingy tena mihoatra ny takatry ny saiko ny hoe nisy mahery setra iray mpamono olona tokony hisitraka ny fiainana, na dia ataontsika hoe migadra mandra-pahafaty aza izy. Rariny tokoa ve izany? Raha ny hevitro dia – tsia.
[…] Ankehitriny dia toa sahala amin'ny sarotra be ny hilaza ampahibemaso fa hoe mandàla ny fanamelohana ho faty ianao – na dia nambàra aza fa maro ny olona no manohana azy io amin'ny anaran'ny tenany. […] Zavatra iray no azo antoka : amin'ity tranga ity, ny hevitra manontolo momba ny demaokrasian'ny maro an'isa dia tsy mankaiza…
Bilaogera iray hafa, michal1000, izay nandefa lahatsoratra tao aminà vavahadin-tseraseran'ny bilaogy Polone iray goavana, salon24, no manoratra hoe  [pl]:
Tsy matahotra fanamelohana ho faty aho […] satria ny didim-pitsarana toy izany dia tsy tokony hotononina akory, na hisy famonoana tokony hotanterahana. Tsy misy antony tokony hametrahana lalàna toy izany raha toa ka tsy misy olona mamono olona amin'ny fomba feno habibiana, manolana sy manakenda, na midaroka mahafaty zaza tsy manan-tsiny. Tsy misy na iray aza ka tsy voaràra ireo heloka voalaza etsy ambony ireo eto Polonina, izy rehetra ireo dia tanterahana an-tsitrapo avokoa. Afaka ny ho tsy manan-tsiny amin'ireo heloka bevava ireo ianao ary tsy hatahotra ny fanamelohana ho faty, na hanaiky azy ireo sy hiatrika ny vokany.
Ilay bilaogera mojapolskadomowa dia mampiaka-peo  [pl] manohitra ny fanamelohana ho faty :
Ny ady henjana ho fampanekena ny valin'ny fifidianana an'ireo avy amin'ny elatra havanana dia vokatry ny fifanandrinana iray hafa eo amin'ireo vondrona roa nivoaka avy amin'ny “Lalàna sy Fitsarana” – mpanohana an'i Kaczyński sy [Ziobro's ]. Jarosław Kaczyński dia nanambàra nandritra ny valan-dresaka iray ho an'ny mpanao gazety fa mety handray fepetra izy mba hanenjanana kokoa ny sazy famaizana. Ankoatr'ireo fiovàna hafa, te-hametraka ihany koa ny fanamelohana ho faty izy. Te-haka ny endrika Sherrif avy amin'i Ziobro ve i Kaczyński ? […] Ity karazan-tsazy ity dia tsy hitondra, na fitoniana, na fibabohana. Tsy ilaina ny fanamelohana ho faty.
Bilaogera iray hafa, nocri, no miteny ho mpanohana ny fanamelohana ho faty, saingy tsy mankasitraka kosa ny hetsika ataon'i Kaczyński  [pl]:
Eny, ry mpamaky malalako isany, izaho manokana dia tsy manana zavatra hankahalako ny fanamelohana ho faty. […] Nefa… miaina eto Polonina aho. Ary nekeko ny fanapahan-kevitra hidiran'ny fireneko ho ao anatin'ny UE. Ka amin'izany dia nekeko ireo teritery araka ny lalàna, ny fanerena ny fireneko hanafoana io karazana fanoneran-keloka henjana be io. Ary satria nanao izany aho, dia tsy maintsy manaiky fa ny fametrahana indray ny fanamelohana ho faty ato Polinina dia tsy hety hifanaraka amin'ny lalàna mihitsy. Izany no vokatry ny marimaritra iraisana, izay nekeko.
Izany no antony tsy ahatakarako mihitsy ny mpanao politika sasany mbola manandrana mikatsaka zavatra amin'ny filalaovana ny “karatry ny fanamelohana ho faty”. Nalaiko sary an-tsaina ho toy izao izy ity satria mora kokoa ny milalao ny fihetsehampon'ny olona. Saingy ity karazana lalao politika ity dia mendrika ny hohelohina tsotra izao. Tena tsy mampino, famitaham-bahoaka fotsiny. Menatra aho noho ny aminao, ry Ing. Kaczyński, ary tsy vao izao no voalohany.
Araka ny fikarohana nataon'ny Social Media Kompas tety anivon'ny fampahalalam-baovao ara-tsosialy, maro amin'ireo lahatsoratra momba io olana io no avy amin'ireo mpampiasa Twitter  [pl]. Ny iray amin'izy ireny, @gkaczmarek, nilaza hoe :
Vao taona vitsy lasa izao dia naherin'ny 70%-n'ny Polone no nanohana ny fanamelohana ho faty, noho izany tsy mahagaga ahy mihitsy ny isa 51% amin'izao fotoana izao.
Iray hafa, @nmaliszewski, no nanoratra hoe  [pl]:
Ary ho famehezana ny rehetra – tsy mahagaga raha mihena ny fanohanana ny Lalàna sy Fitsarana, Revo mitady izay hivelomany ny Polone ary ny hany eritreretin'i Kaczyński dia ny fanamelohana ho faty sy ny matso.
Amin'ny fampitahàna ireo fanambaràn'i Kaczyński amin'ny fanamelohana ho faty, @gregorius74 dia mahita ny sasany amin'izy ireny ho mifanohitra  [pl]:
Ny Lalàna sy Fitsarana dia mankasitraka ny fanamelohana ho faty, saingy fotsiny ao Polonina ihany. Fa rehefa hoe any Bielorosia, dia tsy marina. Fitiavan-tanindrazana re izany :))
Na dia efa nilaza mazava aza ny Papa Ray masina Benedict XVI fa manohitra ny fanamelohana ho faty ny Fiangonana ary namaritra izany ho habibiana sy tsy misy ilàna azy, i Kaczyński kosa, izay mihevitra ny tenany ho mpino rahateo, dia tsy mahita olana amin'izany, ka tonga hatramin'ny fitanisàna “ny tantara lavaben'ny naneken'ny Fiangonana ny fanamelohana ho faty.” Andro vitsy lasa izay, ho fanehoan-kevitra noho ny fanambaràn'i Kaczyński, ny Kardinaly sady Arsevekan'i Varsovie Kazimierz Nycz  dia nanamarika hoe “Andriamanitra irery ihany no hany afaka manaisotra ny ain'olombelona iray”  [pl].
Ilay bilaogera mylilefeluke dia manao fanamarihana momba ny toe-draharaha  [pl]:
Sahala amin'ny nisodrontsondrotra tato ho ato ny Katolika sasany an, Tadiavin-dry zareo ny fametrahana indray ny fanamelohana ho faty – amin'ny anaran'i Jesoa – hoy ny filazan-dry zareo. Ry zareo rehetra ireo no isan'ny voalohany nikiaka ny hoe “aza mamono, sarobidy ny aina tsirairay,” te-hiaro ny aina ry zareo, ary avy eo izany andianà mpihatsaravelatsihy izany no mitady hitondra miverina indray ny sazy faratampony. Ity karazana fomba fisainana ity dia fihemorana, ary na dia efa tany aminà vanim-potoana iray hafa mihitsy aza, dia mbola misy foana satria mbola misy ny olona mamerina hadisoana mitovy, tsy mba naka lesona tamin'ny lasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/12/16/26488/
 Jaroslaw Kaczyński: http://en.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski
 Lalàna sy Fitsarana: http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_Justice
 fivakisana henjana ao anivon'ny antokony ao: http://wyborcza.pl/1,75478,10606096,Ziobrysci_zalozyli_klub__Solidarna_Polska_.html
 ilay lalàna tamin'ny 1997 mandràra ny fanamelohana ho faty: http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Poland
 mpanao politika avy amin'ny elatra havanana no nanambara: http://www.tvn24.pl/12690,1725766,0,1,ziobro-za-kara-smierci--ale-nie-jest-ona-mozliwa,wiadomosc.html
 no manoratra hoe: http://michal1000.salon24.pl/368126,kara-smierci-nareszcie
 dia mampiaka-peo: http://mojapolskadomowa.blox.pl/2011/11/Nie-dla-kary-smierci.html
 tsy mankasitraka kosa ny hetsika ataon'i Kaczyński: http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/596494,kara-smierci---refleksja.html
 maro amin'ireo lahatsoratra momba io olana io no avy amin'ireo mpampiasa Twitter: http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95555
 nilaza hoe : https://twitter.com/#!/gkaczmarek/status/142893935541497857
 no nanoratra hoe: https://twitter.com/#!/nmaliszewski/status/144775631568257024
 dia mahita ny sasany amin'izy ireny ho mifanohitra: https://twitter.com/#!/gregorius74/status/143736722960822272
 dia nanamarika hoe “Andriamanitra irery ihany no hany afaka manaisotra ny ain'olombelona iray”: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kardynal-nycz-krytycznie-o-karze-smierci-tylko-bog,1,4934803,wiadomosc.html
 dia manao fanamarihana momba ny toe-draharaha: http://mylilefeluke.blogspot.com/2011/11/kara-smierci-polityka-koscioa.html